Dzhessi Metkalf - nokururamisira rinozivikanwa mutambi kuHollywood. Zvinofanira kucherechedzwa kuti basa wechidiki webindu mune rimwe rinofarirwa kupfuura yepaTV "Vadzimai vomumba Desperate" nhasi kwakaita jaya chiratidzo romurume uye runako. Uye nhasi, mafeni vakawanda vanofarira Biography yake uye, chokwadi, upenyu hwomunhu.
Dzhessi Metkalf: Biography uye mukuru Data
Nzvimbo yechizvarirwo kuti mutambi December 9, 1978 mu California, munzvimbo peKarimeri Valley. mai vake Nancy DeMaio ari kuItaly uye Portuguese midzi, asi pane vokuItaly uye French vari pakati pehama rwababa.
Zvinofanira kucherechedzwa kuti Dzhessi Metkalf mumakore ake kuchikoro Aifarira zvemitambo. Aiva nhengo huru chikamu Basketball chikwata, uye ipapo vakaenda naye kuna Basketball League muna Waterford. Ndapedza chikoro chesekondari muna New London iye ndanyoresa muNew York University. Zvisinei, mairi haana kugara kwenguva refu, vechidiki akadonha kubva sezvo aronga kuti basa kunyora uye vanotungamira. Asi wakauya kwaari kubudirira mune dzimwe basa.
First basa matanho
Muna 1999, Dzhessi Metkalf akanga achidzinga kuti masikati sipo dhanzi "kuchiva" uye akahwina basa Miguel Lopez-Fitzgerald. Hazvina basa iri uye akava debut paTV. The akatevedzana akaudza vateereri nyaya upenyu mhuri huru dzakawanda uye rinosanganisira zvimwe rakavanzika okunze.
Asi, pasinei dzose zvakagadzirwa uye kuchinja rangano, chirongwa "The Passion" uye havana nguva kuva akakurumbira. Kunyange zvakadaro, nyaya yakanga diki, asi nguva dzose vateereri. Dzhessi Metkalf vakashanda pano kusvikira 2004. Chokwadika, ake mutambo haana kuonekwa - the Guy muvateereri vaiva mafeni uye connoisseurs ose mabhaisikopu pakati kuvadzidzisi vechiHindu.
Uye muna 2003, vanoda mutambi akapa basa noutsinye Vana Maknalti mune mukurumbira zvikuru yepaTV "Mazano Smallville." Jesse aienda vaviri chete Zvikamu, asi akanga nguva cherechedzai.
Dzhessi Metkalf: Filmography
Chokwadi, pashure unmatched kuita basa iri sipo dhanzi wechiduku mutambi vakatanga kuti asaita nani. Muna 2003, iye akapiwa Cameo muchinangwa firimu "Maminitsi 44."
Uye muna 2006 akawana chikuru basa mutambo dema "Die John Tucker!". Pano Guy kwainge narcissistic uye vanonyengera Basketball chikwata mukuru Dzhona Takera, uyo haana kuzeza kushandisa mukurumbira wavo pachavo pakati vasikana sokuvapo vatatu vavo kusarudza kutsiva paari. Zviya, pano mumwe wake aiva Sofiya Bush, Brittany Snow uye yevaAshanti.
Muna 2008, Dzhessi Metkalf (mapikicha dzinoturwa munyaya) akakwanisa kutora chikamu mune kupfura mafirimu matatu. Aitambisa Tristan Mutengo firimu "Loading", uye akazviratidza pamberi vateereri ari muchimiro Granger Woodruff mu firimu "Kune rumwe rutivi mutsetse." Uyezve, musikana mutambi starred ari rinotyisa firimu rinonzi "Insanitarium" - pano akawana basa Jack, uyo anonyepera kuva achipenga kuti aponese hanzvadzi yake, akanga ari chepfungwa kiriniki.
Muna 2009, Dzhessi Metkalf starred mune imwe rinotyisa firimu Roberta Libermana, yaiti "vaneta". Pano akawana basa Craig - baba vake, avo vakanga varasikirwa mwana anosarudza kutsiva munhu Serial muurayi.
Muna 2010, Jesse akanga achimirira mumwe Starring basa - nguva ino, airidza kiyi hunhu ari mutikitivha thriller "Hunonzwisisa Nokusava Nechokwadi". Akazviratidza pamberi vateereri muchimiro CJ, rimwe gweta wechiduku ari kuedza kuratidza venality kuti gweta reruwa. Panzira, kuti mutambi aishanda nzvimbo, pamwe Dzhoel MUR uye Michael Douglas.
Sipo pamwe mutambi
Zvinofanira kucherechedzwa kuti mbiri duku mutambi imhaka kushanda wepaterevhizheni. Muna 2004, Dzhessi Metkalf achaonekwa pamusoro chinovhara basa Dzhona Roulenda, wechiduku murimi uye anoda mumwe vanonyanya kutaurwa - Gabrielle Solís, reDare Eva Longoria. Aiva nhengo huru yakakandwa wokutanga mwaka, asi akasiya basa racho, asi akaramba nguva nenguva kuoneka mairi. Zviya, nokuti basa iri, akanga kaviri nominated kuti Teen Choice Award (muna 2005 akagamuchira mubayiro mu "Best muiti munhurume" muchikwata).
Muna 2010, mutambi akabatana mukuru chakakandirwa kuti "kutambudzwa" pane akatevedzana, apo aitambisa Luke Watson. Uye muna 2012 akatanga kupfura basa idzva, "Dallas", inova kuenderera eponymous wepaterevhizheni 1970-1990. Jesse airidza pano Christopher Ewing - the nomukomana akanaka, uyo pashure pokufa vabereki vokurera awana nhaka huru. Basa iri, kuti mutambi rinobatanidzwa uye achiri.
Chokwadi, mumwe mutambi ane nyanzvi mumitambo nomuviri uye kujairika chitarisiko haasati akatambura kusadiwa. Uye muna 2006, akatanga kusangana Nadin Koyl - muimbi Irish, ano zvikuru nevakawanda musikana ezvokunwa bhendi anonzi Girls Zvinonzwika. Mugore, Dzhessi Metkalf nemusikana wake nguva yakaonekwa pamwe chete paruzhinji. Asi muna 2007 zvikazikamwa pamusoro zvavo zororo. Munguva ichangopfuura, zvazova shamwari kugara, Emma Miller - anozivikanwa socialite.
Kevin Speysi (Kevin Spacey): private upenyu uye ake mafirimu
Firimu "Elysium": vatambi uye mabasa
Actor Dzheyms Nesbitt: Biography, mapikicha. Top mafirimu
Christian Gray: mutambi. Gray Christian ( "50 noruvara vachena"): zita mutambi wacho, Photo
Karachentsov Nicholas - murume vanhu miriyoni vane
Ndiani Donkey Shrek?
How vashongedze masvingo muimba yokugezera: mitemo zvinhu kusarudzwa uye mazano
Unochinja wekare dhishi: muto nokuda stuffed pepper
Black Chipiri. Precipitous kuwa Ruble kuzorwa dhora 11 October 1994
Decorative varinamire nokuti kongiri: kushandisa zvigadzirwa, rakawanda
Kuti mapiramidi akavakwa sei
How kupedza shugaring pamba
Vote wenyu kufarira mhuka mifananidzo iri vanhu Choice Award
Plinth rusvingo nemaoko avo
Driving beadwork Icon: Master Class
Zvirwere pachishandiswa kuenda neherikoputa mumate, dziviriro nekuramba
Kuvaviwa: Zvinokonzera And Prevention
The mafuta zvinokosha ylang-ylang